PP Plastic Ishidi Elingenalutho, PP Plastic elingenalutho Roll, Plastic Ukupakisha Amabhokisi - Runping
Ibhokisi le-PET / PVC
Ifilimu le-PET / PVC
Isevisi ye-OEM Service Inikelwe
Shandong Runping Plastic Co., Ltd ingenye zobuchwepheshe ifektri PP plastic elingenalutho ishidi (roll) futhi Plastic nokupakisha amabhokisi nge ISO 9001: 2008 & RoHs ukuqinisekiswa e Weifang idolobha, isifundazwe Shandong, China.
Ukufakwa komsindo nokufakwa kokushisa
Ngenxa yesakhiwo esingenalutho sephepha lepulasitiki elingenalutho, imiphumela yalo yokushisa nemisindo iphansi kakhulu kunaleyo yeshidi eliqinile. Inokufakwa kahle kokushisa nemiphumela yokuvikela umsindo.
Okokuqala ukuthi izindleko zezinto zepulasitiki ezingenalutho ziphansi kunezinye izinto. Izonga kakhulu izindleko eziningi ngenkathi kuthengwa izinto zokusetshenziswa kumikhiqizo eqediwe.
Kubalulekile ukwazi ukuthi izinto ezilungele imvelo zikhathazeke kakhulu emhlabeni wonke. Ishidi elingenalutho le-PP alinabo ubuthi futhi alingcolisi, futhi lingasetshenziswa kabusha futhi lisetshenziswe kabusha ukwenza eminye imikhiqizo yepulasitiki.
Isiqu somkhono wokuvikela
ukusetshenziswa kokupakisha amabhodlela engilazi kabhiya
uphawu lokukhangisa ngepulasitiki
pp ibhodi eziyize
Siyethemba ukuthuthuka okuhle kwebhizinisi nawo wonke amakhasimende! Siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu!
Isebenzisa i-PP engenisiwe eyi-16 ezenzakalelayo ngokuphelele, imigqa yokukhiqizwa kwamakhasi e-PE ayimishini esezingeni eliphakeme kakhulu ekhaya, esebenzisa ukwakheka kwesikulufa esihlukile, ibhulokhi eguquguqukayo eguqukayo kanye nohlelo olukhethekile lokulawula ukushisa ukuqinisekisa ngokugcwele ukusebenza kwe-plasticization nokusebenza kahle kwe-extrusion. Amasethi ayi-11 okusika okuphezulu kokunemba okusika nokwakha amadivayisi amukela ukucindezela okuthuthukile okuyisicaba nomshini wokusika wokufa, ukusebenzisa idivaysi yokungeniswa kwe-photoelectric ehlakaniphile ukuqinisekisa usayizi onembile wokucubungula ishidi nokwenza ngcono ikhwalithi yokucubungula ngezinga elikhulu kakhulu. Ukusebenza kwamashidi kubuye kuthathe imishini yokushisela ye-ultrasonic esezingeni eliphakeme, imishini ye-nail box ezenzakalelayo nemishini yokuxhuma ukushisa okuzenzakalelayo, imishini yokuphrinta ezenzakalelayo, imishini yokufaka uphawu onqenqemeni oluzenzakalelayo, imishini yokupakisha ezenzakalelayo, njll. Ingakhiqiza ubukhulu be-1.2mm-13mm nobubanzi obungu-2500mm ububanzi be-H kanye no-X ibhodi, enemisebenzi ekhethekile njengokucekelwa phansi kwempahla, anti-static, conductive, ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi kanye nokuguga ukumelana. Okukhipha minyaka yonke kungafinyelela ngaphezu kwamathani ayi-20 000.
Kungani kufanele ukhethe ishidi likapulasitiki elenziwe ngophawu ukuze wenze izimpawu?
IShandong Runping Plastic Industrial Co., Ltd.
Ukusetshenziswa Kwebhokisi Lokungenisa Ibhodi Elingenalutho Emakethe Yemifino